Xaalada Ceerigaabo oo Kacsan iyo Xaabsade oo lagu eedeeyay Dhacdadii dagaal. – SBC
Xaalada Ceerigaabo oo Kacsan iyo Xaabsade oo lagu eedeeyay Dhacdadii dagaal.
Degmada Ceeri gaabo ee Gobolka Sanaag ayaa lagu soo waramayaa in Xaalada deegaankaasi ay kacsantahay islamarkaana laga dareemayo xiisado colaadeed xili maalinti shalay ay ka dhacday israsaaseyn dhexmartay Ilaalada wasiirka Warfaafinta Soomaaliland Maxamed Xaabsade iyo Maleeshiyaad deegaanka ku dhaqan .
Mid ka mid ah Cuqaasha Ceerigaabo oo ku sugan Magaalada Garoowe Xarunta Dowlada Puntland Suldaan Cayduruus Saalax Ibraahim (dhagaweyne) oo la hadlay SBC Interntaional ayaa sheegay in aysan Arinta dagaal ee shalay ka dhacday Ceerigaabo ku saleysneen laba beelood, balse ay ka timid is afgaranwaa dhexmaray wasiirka Warfaafinta Soomaaliland iyo Qaar ka mid ah Shacabka degmadaasi.
Waxa uu intaasi raaciyay Suldaan Ceydaruus in dhacdadii shalay ee dhimashada laheyd uu masuuliyadeeda qaadayo Wasiirka Warfaafinta Soomaaliland Xaabsade, oo uu ku tilmaamay in aanay jirinba dhax dhexaadin uu halkaasi ka sameyn karo, balse ay dhex dhaxaadintu u dhaxeyso beelaha halkaasi wada degen.
Sidoo kale Suldaan Ceydaruus ayaa baaq u jeediyay dhamaan shacabka Ceerigaabo kaas oo ku aadan xasilinta Amaanka iyo ka hortagista Waxyaabaha Colaadaha keeni kara, kana qeybqaataan hirgelinteeda dhamaan dadka deegaanka ku nool.
Ugu Dambeyntii maalintii shalay ayaa magaalada Ceerigaabo israsaaseyntii ka dhacday ay ku dhintee ku dhowaad 4 qof oo midi ay tahay Haweeney halka 3da kalena ay ahaayeen ilaaladii wasiirka warfaafinta Soomaaliland, ka dib markii ay xabadi ka bilaabatay kulan uu wasiirku la lahaa dad ka mid ah dadka deegaanka oo ku saleysnaa dhex dhaxaadinta laba beel oo magaalada wada degen.